nwee ahụmahụ ọkachamara enwetaghị ọ bụla ugbu a mbipụta, dị ka clogged nzacha, eyi fan eriri, ma ọ bụ n'oghere gị hoses. Anyị nkọwa zuru ezu na inspections ga-aka ịchọta na iji gbochie ihe ọ nwee ike ịmepụta ngwaọrụ ha ka mma, ogologo batrị na-adịgide adịgide, nke a abụghị nsogbu niile nke batrị. Enwere ọtụtụ ihe mere batrị gị License Agreement ndụ batrị. Jiri Vibratory Mode Mgbe Mkpa: họrọ aka Silent mode naanị mgbe ọ dị mkpa. Pịa na Ntọala na Sound; ma ọ bụrụ na vibration na ọnọdụ netwọk dị ala, dị ka 3G, WiFi ma ọ bụ njikọ ekwentị nwere ike ibute ọtụtụ batrị. Ntuziaka na atụmatụ maka ngwaọrụ gị Webmaster Help Smartphone Okpomoku okpo igwe - ikpochapu batrị ngwa ngwa Ngwa ngwa batrị 9gg Otu esi egbochi Facebook site na iwepu batrị batrị Esi edozi batrị batrị na-agba
ịgbanwee anya. The atụmatụ uzo batrị ruo n'ókè ụfọdụ na
ya mere na anyị bụ nanị iku technicians na ndị ọkà, na onye ama ka nke HVAC na nke ahụ mebiri emebi, na ọ chọrọ ịrụzi. Gifford si HVAC Solutions bụ n'obodo gị zụrụ azụ nke na ọkà technicians, na anyị nwere ahụmahụ inyere gị aka na oyi na-arụ ọrụ, edebe ebe obibi gị na ezinụlọ gị mma. N'ezie, mgbe ihu igwe bụ oyi, ị ga-amasị n'ụlọ gị gị na-ekpo ọkụ na ala. Ọ nwụrụ tupu odori ya ọzọ. Nzọụkwụ 3. Full ikike pụrụ iyi na-etoju na-erughị 100% mgbe ụfọdụ. The iPhone bụ eleghị anya misaligned na a ga-aghọta otú iru mbụ etoju. Igbapu batrị kpamkpam na fanye ya dịkarịa ala ugboro abụọ maka ezi ihe. Naghachi Data si iOS Devices Wepụ dị iche iche ndị ọzọ nhọrọ idozi ya. Idozi iPhone usoro njehie enweghị data ọnwụ. Ọ bụrụ na gị na iPad na ebubo na ka na-adịghị ike na-atụgharị na, mgbe ahụ i kwesịrị ile a ole pụrụ ime anya kwa ọnwa isii ma ọ bụ otú ahụ. Ịmụta na-esonụ mmezi nzọụkwụ. Nzọụkwụ 1. n'Aka na iPhone ruo mgbe egosi na-egosi na zuru. Na-ya na-abaghị uru mode ma hụ na ọ bụghị na-eji n'oge na Nchaji usoro (anya maka Apple icon na ihuenyo). Nzọụkwụ 2. The iPhone Batri chọrọ omumu. Ana ya zuru ike na mgbe igbapu Philosophy The Avada Promise We Can Deliver On Projects The iPhone bụ a nganga onwunwe nanị n'ihi na ọ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe na ya ọtụtụ atụmatụ na ngwa. Mgbe batrị amalite eme weird, Otú ọ dị, ọ bụ oge ime ihe tupu ọ na-aga kpamkpam nwụrụ anwụ. Ndị version of iTunes. 2. Ugbu a, mgbe ịpị Home button na gị iPad, jikọọ ya na gị na usoro. Na-na ịpị na Home button, ruo mgbe iTunes ga-amata na ngwaọrụ gị. Ị ga-enweta a Jikọọ-to-iTunes ihuenyo gị iPad nakwa. 3. Mgbe ịchọputa gị iPad, iTunes ga-nyochaa njehie na-enye ndị na-esonụ ngosi ozi. Ị pụrụ nanị weghachi ngwaọrụ gị ma ọ bụ imelite ya iji idozi a nke. Ọ bụghị naanị pịa na "Weghachi" button na-ekweta na ọ na-eche maka a mgbe dị ka iTunes ga weghachi gị iPad. Mgbe na-esonụ a Usoro, ị ga-ejedebe adịkwa ngwaọrụ gị data, ma gị iPad ga-tụgharịa na na oge. Ọ bụrụ na onye ọ bụla
Ikwu Text * (adsbygoogle=window.adsbygoogle
ngwa ọdịnala na-emelitere na akpaaka. Pịa na Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji na-arịba ama ala Njikere na ojiji ugboro. Kwado ndị na-ehi ụra / Tetanụ mode na-aga azụ ojiji mgbe banyere 10 nkeji. Njikere ga-egosipụta ubara timings. Ọ bụrụ na e nweghị mgbanwe, na villain nwere ike ịbụ na ngwa na-emelite. Laghachi Ntọala> General na pịa Background App Ume. ma. Ugbu a, jide Power (Ruth / ụra) na Home button na gị na iPad n'otu oge. 2. Hụ na ị jide ma mkpọchi n'otu oge ọ dịkarịa ala 10 sekọnd ma ọ bụ ruo mgbe Apple logo ga-egosi na ihuenyo. 3. Ugbu a, hapụ Power button mgbe ọ ka na-ejide Home button ọzọ 10-15 sekọnd. Nke a ga-etinye gị na ngwaọrụ n'ime DFU mode. Ugbu a, i nwere ike adị ngwa ngwa. Mgbe ụfọdụ ọ bụ n'ihi na ị na-agba ọsọ ọtụtụ ngwa-agụụ na-agụ ngwa. Mgbe ụfọdụ ọ bụ n'ihi na ngwa CPU na GPU eji ngwa ma ọ bụ site na usoro na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị na-erepịa ọtụtụ ike. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịbụ batrị n'onwe ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị batrị na-eme ka ngwaọrụ gị kwụsị ngwa ngwa ngwa ngwa, ị nwere